Matambudziko ne iPhone yako? Kudzorera kunogona kuzvigadzirisa | IPhone nhau
Gore mushure megore iOS inogadziridza inosvika uye zvinoreva kuti kwemavhiki (kana mwedzi) vashandisi vanonyunyuta nezvematambudziko nemidziyo yavo. Izvi zvinonyanya kutaurwa mumidziyo yekare, asi zvitsva hazvisi pasina matambudziko futi. Bhatiri rinogara zvakanyanya kushoma, kuvhara mafomu, mamwe asingashande sezvaanofanirwa, kunonoka kwesystem, kutangazve ... ese marudzi ekukundikana anonzi nevashandisi, izvo zvinoitika zvisina kujairika uye zvisina kugadziriswa mushure mekugadziriswa kwepamutemo.
Gore rega rega makomendi ezvinyorwa anozadzwa nemibvunzo yako nezve maitiro ekugadzirisa zvingangoitika zvikanganisoPa Twitter iwe unotibvunza mhinduro kumatambudziko ako, kana pane yedu Teregiramu chiteshi unoenda kunotsvaga clue iyo inobvumidza yako iPhone kuti ishande sezvainofanirwa. Uye gore negore tinodzokorora zvakafanana: mhinduro ndeyekudzorera yako iPhone. Isu tinotsanangura nei uye sei iwe uchikwanisa kuzviita.
1 Kugadziridza kana kudzorera? Misiyano
2 Backup haisi yakanaka sarudzo
3 Iine "gore" kutora ruzivo kuri nyore
4 Zvishamiso hazvipo, asi zvinoshanda
Kugadziridza kana kudzorera? Misiyano
Apple yakaunza zvidzoreso kuburikidza neOTA gore rapfuuras, uye izvi zvave kureva kuti vashandisi vanokanganwa kuti chii kubatanidza yedu iPhone ku iTunes kugadzirisa. Iyo inokurumidza uye yakasununguka maitiro, ari nyore sekupinda maMisetera eiyo iPhone kana iPad uye nekudzvanya Kwidziridzo. Kwave kuri kuenda kumberi, uye ndiyo sarudzo inofanirwa kushandiswa uye zvese zvinofanirwa kushanda sezvazvinofanira, asi chokwadi ndechekuti pane dzakawanda zviitiko hazvisi. Kukwidziridza zvinoreva kuisa iyo nyowani system pamusoro pechinyakare system, uye zvinoreva kuti isu takasara nemarara akafanana atanga tatounganidza.
Iko kusununguka kwekuvandudza yako iPhone uye kuti mushure mekuita zvese zvakanyatso fanika sepakutanga asi nenhau dzeshanduro nyowani hazvirambike. Uye kazhinji yenguva yacho inofanirwa kuenda mushe, saka haisi maitiro andisingakurudzire, kwete zvachose.. Asi kana uine matambudziko, kana yako iPhone isingashande sezvainofanirwa, kana bhatiri risingagare hafu sekureba kwaraimboita, saka yave nguva yekuti utarise dzimwe nzira.
Iko kudzoreredzwa kunofanirwa kuitwa kubva pakombuta, kubatanidza yako iPhone kana iPad kune iTunes uchishandisa yako Mheni tambo uye nekudzvanya pane Dzosera bhatani. Ndeupi mutsauko neyakagadziridzwa? Zvakanaka chii foni yakadzimwa uye iyo sisitimu yekushandisa yakaiswa kubva pakutanga, saka pakupera kwemaitiro iwe unenge uine "nyowani" iPhoneKunge nyowani kunze kwebhokisi, asi neshanduro nyowani. Nemaitiro aya isu takabvisa chero trace yakasara pane chishandiso chekushandisa, masystem system, nezvimwe. uye neizvi isu tabvisawo marara akaunganidzwa pane chako chishandiso panguva yese iyi uye izvo zvinogona kuve zviri kukonzera matambudziko ako. Uye zvakadii neruzivo rwangu rwese?
Backup haisi yakanaka sarudzo
Vazhinji vashandisi vanoshandisa yakachena kudzoreredza asi vozodzoreredza backup saka zvese zvadzokera kune zvazvaimboita. Izvo hazvisi zvinobatsira pamusoro pekuvandudza, nekuti iyo kopi ichakwevawo matambudziko aungave iwe. Kana iwe uine zvikanganiso zvekugadzirisa, kudzoreredza uyezve uchishandisa iyo backup, zvakajairika kuti iwe unoramba uine ivo. Yegadziriro yeparutivi ndeye backup kana paine tsaona uye iwe unofanirwa kudzoreredza iyo yakarasika ruzivo, ini handimbomboishandisa kuti ndiwanezve ruzivo mushure mekudzoreredzwa nekuti iyo iPhone haishande zvakanaka kwandiri.
Iine "gore" kutora ruzivo kuri nyore
Makore apfuura kudzoreredza chishandiso yaive gehena, nekuti zvaireva kutora mimhanzi yese, mapikicha uye rumwe ruzivo rwawaive narwo pane yako iPhone pakombuta yako wozvidzorera kumashure. Asi nhasi neICloud maitiro acho ari nyore. Haisi chete ako mahukama, makarenda, zviyeuchidzo zvakachengetwa mugore ... asi iwe unogona zvakare kuve ako ese mapikicha nemavhidhiyo zvakachengetwa. Apple Music kana Spotify zvakare inokutendera iwe kuti uwane nekukurumidza mimhanzi yako mushure mekudzoreredza. Pane ruzivo rwakanyanya kushoma rwausingakwanise kutora kubva kusevhisi yegore, saka usati wadzorera gore, chinhu chega chaunofanirwa kuita kuve nechokwadi chekuti une zvese zvakanyatsogadziriswa (iCloud, Dropbox, Google Drive kana chero system yaunoshandisa).
Kunyangwe mitambo yatove nayo mune dzakawanda kesi yavo yekuchengetera gore mugore, kungave kwakananga muICloud kana kuburikidza nemasevhisi avo, mazhinji emitambo yatinayo nhasi paIOS ine imwe nzira yekuchengetedza zvawakawana uye kana unovaisazve haufaniri kutanga kubva pakutanga. Nekusvika kweIOS 11 uye watchOS 11 kunyangwe iyo Hutano uye yekuita chiitiko data yeApple yako Watch yakatochengetwa muICloud, saka hapana pembedzo. WhatsApp zvakare ine yayo yega iCloud backup ... Haufanire kutya kurasikirwa nechinhu kana zvese zvanyatsogadziriswa, iwe unofanirwa kungozvitarisa.
Chinhu chega chaunofanirwa kuita kana chishandiso chadzorerwa kupinza account yako uye kumirira zvese kurodha pasi pasina matambudziko. Ipa iyo yako nguva yakabatana neWiFi network uye mirira nemoyo murefu kuti iyo data ipore. Ehezve, iwo mafomu anofanirwa kutorwa pasi zvakare. Nekusashandisa iyo backup hatizove nechero application yakadzvanywa, asi iro harisi dambudziko rakakomba, pane kudaro. Mangani mashandisiro awakaisa uye mangani aunoshandisa chaizvo? Kana chishandiso changodzoreredzwa uye maapplication akaiswa, iwe uchaona kuti iwe une yakawanda yakawanda yemahara nzvimbo, nekuti iwe wakasiya kumashure emakumi emakumi maapplication awakange waisa uye ausina kumboshandisa.
Kuti utore zvekushandisa iwe haufanire kuenda mumwe neumwe uchizvitsvaga muApp Store. Zviri nyore kuwana mapurogiramu ako akatengwa mukati me iPhone uye tinya pane aunoda kurodha pasi. Zviripachena izvi zvinofanirwa kuitwa zvakabatana neinternet network, uye kana zvichikwanisika neiyo iPhone yakanyatsochaja kana yakabatana kutakura. Iyo nyowani iOS 11 system iyo inokutendera iwe kufambisa akati wandei maikoni panguva imwe chete zvakare inoita kuti basa rekuronga mafomu nemafaira nematafura zvive nyore., saka mumaminetsi mashoma iwe unenge uine maapuro ese aunonyatsoda akarongeka zvakakwana.
Chimwe chitsva cheIOS 11 icho chakanakira patinotanga kubva pakutanga ndiyo iCloud Keychain uye sei ikozvino mafomu anogona kuishandisa. ICloud Keychain inochengetera data rekuwana uye inozvifananidza pamidziyo yako, kuitira kuti paunovhura application inowirirana, zita rekushandisa nephasiwedi zvinogona kuzadzikiswa zvoga.
Zvishamiso hazvipo, asi zvinoshanda
Hatisi kuzozvinyengera isu, zvishamiso hazvipo. Zvekare zvishandiso zvinotambura neshanduro nyowani uye mabhatiri mushure memakore maviri hazvisi izvo zvavaive, uye hapana chishamiso nzira iri kuzodzivirira izvi. iOS zvakare yakabwinyiswa mune akateedzana akateedzana, ayo anosunungurwa izvo, uye kuuya kuri kuuya kweIOS 11.1 kunogona kunge kuri mhinduro kumatambudziko evazhinji venyu zvinoenderana nemiedzo ichangoburwa yakaitwa nevazhinji vedu. Asi kana uine matsva matsva matambudziko ako asina kugadziriswa, usati waenderera nekutambisa nguva ndinokurudzira kuti udzorere chishandiso chako kubva pakutanga, haurasikirwe nechinhu uye unogona kushamisika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Matambudziko ne iPhone yako? Kudzorera kunogona kuzvigadzirisa
pakupedzisira! kune kamwechete munhu anotsanangura zvakajeka nei usingafanire kuita ota mushure me ota mushure meota. Ini ndinogara ndichidzorera pakati peshanduro huru uye pese panodhakwa foni bhatiri (ka2 pagore kunonyanyisa, kamwe munaGunyana panoburitswa ios nyowani, uye imwe munaKurume apo ota yakati wandei yatoiswa) uye neayo 0 matambudziko ebhatiri.
Chinyorwa chakanaka Luis !!
Chinhu chega chandakarasikirwa (nekuti hachina kujeka kwandiri) mutsauko pakati pekudzorera uye kudzoreredza neDFU. (Mukati, ndeupi mutsauko uripo?)
Ndatenda zvakare nezvinyorwa izvi !!
Mangwanani akanaka, ndine mubvunzo, unojekesa kuti hazvina kunaka kugadzirisa kana kudzoreredza kopi yeTunes ... asi, kudzorera kopi yeICloud? zvakaipa? ... hazvina kujekesa kwandiri nedzidziso yako kana iyo iphone yadzoreredzwa unoigadzirisa se iphone nyowani neapuro yako id, kana kana ukadzorera iyo icloud backup ... chii chingave mutsauko? maererano!
Mhoro Alvaro. Icho chinyorwa chinoti iyo backup haifanire kutakurwa, nekuti inotakura zvese zvikanganiso. Ita kunge iPhone nyowani.
Apple inokurudzira vagadziri kuchinjisa maapps avo kune iyo nyowani iPhone X